Bit By Bit - Ubunzima intsebenziswano - 5.4.2 PhotoCity
PhotoCity usombulula iingxaki nomgangatho data yeesampuli ekuqokeleleni idatha isasazwe.
Websites ezifana-Flickr nakuFacebook zenza abantu ukwabelana imifanekiso kunye nabahlobo babo neentsapho, kodwa ke ukwenza zokugcina enkulu kweefoto enokusetyenziswa ezinye iinjongo. Umzekelo, Agarwal et al. (2011) esizama ukusebenzisa ezi foto ukuba "Ndakhele eRoma Day" ngokusebenzisa 150,000 imifanekiso eRoma ukudala ngokutsha 3D yesixeko. Iziza zabakhenkethi ngathi sele kukho imifanekiso eyaneleyo online ukuvelisa imifuziselo 3D (Figure 5.10), kodwa umgangatho wezi fakelwa ngokutsha zaye lunyiniwe ngenxa yokuba iifoto ezininzi ithatyathwe iimbono efanayo oluthile, eshiya iinxalenye izakhiwo unphotographed. Ngokubhekele phaya, kuba iindawo ezininzi mzi, iifoto akwanelanga zazifumaneka. Ngoko ke, esebenzisa idata ufumanise bogcino photo, akuzange kube lula ukuvelisa yonke eRoma. Kodwa, kuthekani ukuba amavolontiya ezino usemkhosini ukuqokelela iifoto eziyimfuneko ngokwenene "Ndakhele eRoma Day"?
Umfanekiso 5.10: A 3-D kwakhona kwe sele evela iseti elikhulu imifanekiso-2-D kule projekthi "Building eRoma Day". Oonxantathu zimele iindawo bemifanekiso zathatyathwa apho (Agarwal et al. 2011) .
Ukwenzela ukuba ukuqokelelwa ekujoliswe amanani amakhulu iifoto, Kathleen Tuite noogxa kuphuhliswa PhotoCity, umdlalo ifoto-lofundo. Enye into entle PhotoCity kukuba kulwenze umsebenzi ezinokuba esoma ekuqokelelni-ufaka iifoto-ibe umsebenzi umdlalo-ezifana ebandakanya amaqela, iinqaba, nemikhanzi (Figure 5.11). Uyilo PhotoCity kwakhona Ilula uyayisombulula isampuli nomgangatho data nemingeni eBird kunye nezinye iiprojekthi nokuqokelelwa kwedatha isasazwe.
Umfanekiso 5.11: PhotoCity wajika umsebenzi ezinokuba esoma yokuqokelela iinkcukacha (oko kukuthi, iifoto ufaka) waza wajika wangena umdlalo (Tuite et al. 2011) .
PhotoCity waqala amiselwe ukuze kukwazeke ngokutsha 3D zeedyunivesithi ezimbini: Cornell University kunye neDyunivesiti eWashington. Abadlali ekhampasini bangabolekisana ukuhlola imeko yangoku imodeli kwakhona kwikhampasi yabo. Ngoko, ababanga nako ukufumana amanqaku ngokuthi ufaka imifanekiso ezandisa imodeli yangoku. Umzekelo, xa imodeli ngoku Uris Library (kwiCornell) waye inemibalabala kakhulu, umdlali banokurhola ngongoma ngo ufaka iifoto emitsha kuwo. Okubalulekileyo, imifanekiso ziye kufakwa kufuneka ziyadibana iifoto ezikhoyo ukwenzela ukuba bakwazi mazingqinisiswe, kwaye inani leendawo umdlali sekholbheki isekelwe imali ifoto yabo unegalelo imodeli yangoku. Ekugqibeleni, abaphandi baye bakwazi ukusebenzisa ezi foto phezulu ukwenza imifuziselo 3D inkjet lwezakhiwo omabini kwiikhampasi (Figure 5.12).
Umfanekiso 5.12: Umdlalo PhotoCity zanceda abaphandi kunye nxaxheba ukwenza imifuziselo ezikumgangatho ophezulu 3D lwezakhiwo usebenzisa iifoto kufakwe nxaxheba (Tuite et al. 2011) .
Uyilo PhotoCity Ilula usombulula iingxaki ezimbini: Uqinisekiso-ngcombolo kunye novavanyo. Okokuqala, iifoto zaye wawusebenza ngabo kuthelekiseka ngokuchasene iifoto zangaphambili ezibe yena zithelekiswe nangemifanekiso yangaphambili yonke indlela emva iifoto imbewu eziye kufakwe abaphandi. Ngamanye amazwi, ngenxa yale angafuneki nganto eyakhelwe-ngaphakathi, kunzima kakhulu ukuba inkqubo ukwamkela data ezimbi. Okwesibini, inkqubo amanqaku oololiwe ngokwemvelo nxaxheba ukuqokelela ezibalulekileyo-kungekhona eyona ezingafanelekileyo-data. Enyanisweni, apha ezinye izicwangciso ukuba abadlali luchazwe ngokusebenzisa ukuze bafumane amanqaku amaninzi, nto leyo ilingana ukuqokelela idatha exabiseke kakhulu (Tuite et al. 2011) :
"[Ndazama] ezaku ixesha losuku kunye nezibane ukuba ezinye imifanekiso Kwathatyathwa; oku kuzakukhusela kwaliwa mdlalo. Ngako oko wathi, namafu le ilungileyo kude xa usebenzisana ezimbombeni kuba Ngokwahlukileyo ngaphantsi eyanceda nani umdlalo ngaphandle wew kwimifanekiso bam. "
"Xa ke ilanga, mna kusetyenziswa iimpawu anti ukushukunyiswa-ikhamera wam ukuvumela ngokwam ukuthatha iifoto ngelixa ehamba hamba kwizowuni ethile. Oku wavumela ukuba ukuthatha iifoto nkumnkum ngelixa yokungabi ukuyeka mitsi yam. Kwakhona ibhonasi: ngaphantsi abantu Wandijonga "!
"Ukuthatha imifanekiso ezininzi zokwakha enye 5 megapixel ikhamera, uze ukuza ekhaya angenise, ngamanye amaxesha ukuya eyahlukeneyo kulo 5 kwi ihlumelo veki, icebo capture photo ephambili. Uququzelela Iifoto abalawuli yangaphandle yediskhi ngokwengingqi ekhampasini, ukwakha, ngoko ubuso yokwakha enikwa kuluhlu elungileyo zokuceba lifaka. "
Ezi ngxelo ukusuka nxaxheba babonisa ukuba xa zibonelelwa ingxelo ezifanelekileyo, bathi babe ingcali kakhulu ukutsala data umdla abaphandi.
Ngokubanzi, iprojekthi PhotoCity ibonisa ukuba isampuli nomgangatho data azikho iingxaki gqithi ekuqokeleleni lokuhambisa data. Ngaphezu koko, loo nto ibonisa ukuba iiprojekthi nokuqokelelwa kwedatha yasasazwa ukuba ziphelela imisebenzi abantu esele ukwenza zikhutyaziwe, ezifana ukubukela iintaka. Ekuyilweni ekunene, amavolontiya sinokukhuthazwa ukwenza ezinye izinto kakhulu.